🥇 ▷ Rockstar wuxuu soo bandhigayaa cusboonaysiinta xiga ee Red Dead Online ✅
Rockstar wuxuu soo bandhigayaa cusboonaysiinta xiga ee Red Dead Online
Ciyaaraha Rockstar waxay si rasmi ah u soo bandhigeen casriyeynta soo socota ee Red Dead Online, waxayna ballanqaad ka qaadaysaa waxyaabaha ku saabsan jidka kuwa doonaya doorka diiradda badan ee ciyaaraha internetka. Daabacaad ku daabacan mareegta rasmiga ah ee Ciyaaraha Rockstar, horumariyehu wuxuu bixiyay faahfaahin cusub oo ah casriyeynta Red Dead Online, oo la sii deyn doono 10ka Sebtember. Qaabab cusub oo ay ciyaartoygu ku dalban karaan qaabkooda ciyaarta ayaa qayb ka ah farsamooyinka daba-galka ciyaarta xadka ee qorshaynaya xirfadaha cusub, gunnooyinka firfircoon iyo waxyaabo badan oo dheeri ah.
Xilligan la qorsheeyay in la soo bandhigo saddex kaalmood si ay u dhintaan Red mutulayaasha Online: Ugaadhsiga qaaliga ah, oo u erya sharciyo khatar leh si ay u helaan abaalmarin kaligood ama baandada; Ganacsade, kaas oo xoolaha u eryanaya dhogorta halka sidoo kale gacan ka geysanaya aasaasida shirkad ganacsi oo cusub; Y Aruuriyaha, oo u safraya Galbeedka isagoo raadinaya waxyaalaha udgoon iyo wixii kaloo qiimo leh.
Ciyaartoydu waxay urursan karaan waaya-aragnimada mid kastoo ka mid ah doorarkaan iyagoo kaqeyb galaya ergooyin iyo nashaadyo xiriir la leh horumarkooda waqti kasta. Tani waxay ka dhigan tahay in Ciyaartoyda Red Dead Online si fudud ayey iskugu beddelan karaan inta u dhexeysa raadinta abaalmarinta iyo raadinta khasnadaha lumay waqtigiisa firaaqada ah, in kasta oo ay ku kacayso kor u qaadidda darajooyinka doorka degdegga ah ee noocaas ah.
Cusboonaysiinta ayaa sidoo kale la socota waxyaabo badan oo cusub iyo tayada hagaajinta nolosha oo quseyn doonta Red Dead Online gebi ahaanba. In kasta oo daabacaaddu ballan-qaaday in astaamaha cusub iyo saxitaanka la sixi doono goor dhow, hadda Kuwani waa isbeddelada iyo astaamaha cusub ee aan ognahay:
Kordhinta xakameynta ciyaaryahanka oo leh dhaqdhaqaaq la wanaajiyey oo ku jira wejiyada dagaalka iyo is-rasaaseynta.
Xulashada madadaalada ee Character ee aan u baahnayn luminta horumarka.
Adkeysiga weyn ee waxyeelada qaabka ciyaarta daafaca.
Kaararka xirfadaha cusub.
Caqabadaha cusub ee maalinlaha ah iyo caqabadaha doorka maalinlaha ah.
Dhacdooyin firfircoon oo dheeri ah.
Dhacdooyinka wareega wareega ee bilaashka ah ee lala xiriirinayo howlaha cusub.
Meelo dheeri ah oo xasilloon
Qiimaha iibka oo fiicnaaday dhammaan dahabka.
Weelasha lagu rakibi karo ee ku dhex yaal maraakiibta deegaanka.
Mashiinno dheeri ah oo badan.
Suurtagalnimada in magacyo lagu kaydiyo armaajo.
Dib u qaabaynta hubka si loo yareeyo ku tiirsanaanta tallaalada madaxa ee PvP.
Red Dead Online hada waxaa laga heli karaa Xbox One iyo Ciyaarta 4.